Los Gigantes ọnụ ọnụ ugwu na Tenerife | Akụkọ Njem
Mgbe anyị na-aga ezumike na Tenerife enwere ọtụtụ nleta ndị fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa, otu n'ime ha bụ Mount Teide, mana obi abụọ adịghị ya banyere ọnụ ọnụ ugwu Los Gigantes. Ugwu ndị a mara mma nke dakwasịrị n'oké osimiri abụrụla otu n'ime ebe ndị njem nleta ya, yabụ taa anyị nwere ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ ịme gburugburu ya.
Ọ bụrụ na anyị gaa tinye akụkụ a nke Tenerife na ụzọ gasị anyị, mgbe ahụ anyị kwesịrị ịnụ ụtọ ahụmịhe niile anyị nwere ike. Ọnụ ọnụ ugwu ndị si n'oké osimiri ahapụghị onye ọ bụla enweghị mmasị, mana ọ bụghị naanị ihe nwere ike ịmasị n'akụkụ a nke Tenerife.
1 Otu esi aga n'ugwu ugwu Los Gigantes
2 Nkume dị elu
3 Utezọ si La Masca
4 Atgbọ njem
5 Port nke Santiago
Otu esi aga n'ugwu ugwu Los Gigantes
Ọ bụrụ na ụgbọ elu gị bịarute na ọdụ ụgbọ elu Tenerife South ị nọ na ihu ọma, ọnụ ọnụ ugwu dị ihe dị ka kilomita iri anọ na ise. N'ọnọdụ ọ bụla, n'àgwàetiti ahụ ka ọ dị mma ịnwe ụgbọ ala mgbazinye, ebe nleta na Teide chọrọ ọ dịkarịa ala otu elekere njem, ebe ọ bụ na etiti. Site na Costa Adeje ị nwere ike ịga n'okporo ụzọ awara ndịda ịga ebe Puerto de Santiago. Enwekwara ike ịga n'okporo ụzọ nkịtị, ebe anyị nwere ọtụtụ ụzọ. Obere obodo Puerto de Santiago apụtawo na mmetụta ndị njem, ọ bụkwa ebe dị jụụ na isi ihe ụgbọ mmiri na-ahapụ iji hụ ọnụ ọnụ ugwu. Ihe ọzọ anyị nwere ike ime bụ ịga obodo Masca ịhụ ọnụ ọnụ ugwu n’ụzọ ọzọ. Site na obere obodo a ụzọ njem nke ihe dị ka awa atọ na-amalite nke na-abanye na ọnụ ọnụ ugwu wee rute n'ụsọ osimiri Masca, nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa.
Nkume dị elu
Ugwu ndị a dị ezigbo mkpa nye ndị Guanches, ndị nwe ugwu agwaetiti ahụ tupu mmeri ahụ. Maka ha, ọnụ ọnụ ugwu ndị a bụ 'Mgbidi nke hel' ma ọ bụ 'Mgbidi nke ekwensu', Ebe uwa biri. Ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ ihe dị mkpa maka ha, nke taa aghọọla ebe iji nwee obi ụtọ n'àgwàetiti ahụ n'ụzọ dị iche. Nnukwu njem nlegharị n'ụsọ mmiri abụghịzi naanị ihe na-adọta agwaetiti ahụ, ọ bụkwa na ọnụ ọnụ ugwu ndị a nke ugwu mgbawa mepụtara abụrụla ihe a na-ekwu. Ọ bụghị naanị ha, kamakwa ọgaranya nke oke mmiri na gburugburu ọnụ ọnụ ugwu.
Utezọ si La Masca
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị chọrọ ime ihe dị iche na ị bụghị umengwụ, mgbe ahụ ka a na-atụ aro ka ịme nke ahụ njem njem nke malitere site na obodo La Masca, nke dị nso na Santiago del Teide. Ọ bụ obere obodo, mana nke na-ahụ ka ọrụ ya ba ụba n'oge ọkọchị. Ime ụzọ ahụ adịghị mfe, n’ihi na ọ na-eji ụkwụ were ụkwụ awa atọ gaa osimiri Masca, na-agafe n’agbata ndagwurugwu. Mgbe ị rutere n'ụsọ osimiri, e nwere nanị ụzọ abụọ. Otu bụ iji ụgbọ mmiri lee ugwu dị iche iche, nke ga-akpọga anyị Puerto de Santiago, ma ọ bụ tụgharịa wee laghachi elekere atọ n'ụkwụ n'ụzọ anyị zoro. Ekwesiri ikwu na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-ahọrọ njem ụgbọ mmiri, nke mejupụtara ahụmịhe mara mma.
Otu n'ime ihe fọrọ nke nta ka onye ọ bụla mere na Tenerife bụ njem ụgbọ mmiri tinyere ọnụ ọnụ ugwu na azụ whale. Dolphin dị mfe ịhụ, ebe ha na-esokarị ụgbọ mmiri mgbe ha na-aga. Enwekwara otu ìgwè whale, ọ bụ ezie na ndị a anaghị adịkarị mfe ịnweta ya, ebe ọ bụ na enwere oge mgbe ọ dị mfe ịhụ ha. Agbanyeghị, na obodo Puerto de Santiago anyị nwere ike ịkpọ njem ụgbọ mmiri ma nwee uzo. Ọ dabere na oge ị na-aga, mana site na ahụmịhe, n'oge dị ala, ịkwesighi ịde akwụkwọ, ebe enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ha na-enwekarị onyinye na ohere zuru oke. A na-ejikarị nkwụsị ụfọdụ n'ụsọ mmiri ndị a kwụsịrị site na ndagwurugwu ndị dị n'akụkụ ugwu iji nweta nri na igwu mmiri.
Obere obodo a apụtawo site na ọrụ ndị njem na mpaghara chọrọ ịnụ ụtọ ọnụ ọnụ ugwu. N'ime obodo ị nwere ike ịnụ ụtọ ụfọdụ ịzụ ahịa na obere ụlọ ahịa ihe ncheta, ma ọ bụ rie n'ọtụtụ ụlọ nri. Anyị nwekwara ụlọ nkwari akụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnọ otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ n'ebe a. E nwere ọtụtụ obere osimiri nwere agwa mgbawa na-enye anyị ohere ịnwụ tupu ma ọ bụ mgbe anyị hụrụ ọnụ ọnụ ugwu na ọdụ ụgbọ mmiri sara mbara nke ụgbọ mmiri si na ya pụọ. Nke a bụ ebe kachasị mma iji mezue ụbọchị ahụ ọchị na ugwu, yana obere ntụrụndụ na ụdị ọrụ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Los Gigantes ọnụ ọnụ ugwu na Tenerife